Maxay tahay sababta dib loogu dhigay imtixaanka dugsiga sare ee Soomaaliya? - Caasimada Online
Home Warar Maxay tahay sababta dib loogu dhigay imtixaanka dugsiga sare ee Soomaaliya?
Maxay tahay sababta dib loogu dhigay imtixaanka dugsiga sare ee Soomaaliya?
Muqdisho (Caasimada Online) – War-saxaafadeed ka soo baxay Wasaaradda Waxbarashada Soomaaliya ayaa lagu sheegay in muddo todobaad ah dib loo dhigay imtixaanka Shahaadia ah ee dugsiga sare ee dalka oo algu waday inuu billowdyo 22-ka May.
Hoos ka aqriso war-saxaafadeedka wasaaradda.
Dib u dhacaan ayaa ka yimid culeysyada soo kordhay maalmihii la soo dhaafay, taas oo saamaysay ardayda, ayay Wasaaraddu garawsatay in lagama maarmaan ay tahay in ardayda la siiyo waqti dheeri ah si ay isugu diyaariyaan imtixaanka.
Haddaba, Wasaaraddu iyada oo ka amba-qaadeysa dib-u-dhacaas ayaa waxay halkaan idinkula wadaageysa in imtixaanka sannad-dugsiyeedkan 2020/21 la qaadi doono 29ka Maajo illaa 2da Juunyo, 2021.
Sidaas daraadeed, Wasaaraddu waxay ku boorinaysaa dhammaan ardayda ka qayb-gelaya imtixaanka in ay waqti siiyaan muraajacada cashirrada si ay ugu guuleeystaan imtixaanka ayna u helaan natiijo ku habboon dedaalkooda.
Wasaaraddu waxay u rajaynaysaa dhammaan ardayda Soomaaliyeed ee sanadkaan imtixaanka u fariisanaya Nasiib Wanaagsan iyo Muqtaqbal Horumarsan.